Alemaina: Fampirantiana Ahitana ny Fijalian’ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
Sarin’ny Toerana Fahatsiarovana An’i Ravensbrück, any Fürstenberg, any Alemaina, nalaina vao haingana.
10 JANOARY 2019
Tranombakoka Manao Fampirantiana ho Fahatsiarovana ny Vavolombelon’i Jehovah Nampijalina Tany Alemaina
Mikarakara fampirantiana haseho any amin’ny toerana samihafa ny tranombakoka Fahatsiarovana An’i Ravensbrück. Izao no loha hevitra: “Fandrarana ny Vavolombelon’i Jehovah sy Fampijaliana Azy Ireo Tany Amin’ny Toby Fitanan’i Ravensbrück sy Tany Amin’ny Fonjan’ny RDA.” Asongadina amin’ilay izy ny fijaliana niaretan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Alemaina nandritra ny fitondran’ny Nazia (1933-1945) sy ny fitondran’ny Repoblika Demokratikan’i Alemaina (RDA na Alemaina Atsinanana; 1949-1990) ary ny Repoblikan’i Weimar (1918-1933). (Jereo ilay efajoro hoe “ Fanenjehana ny Vavolombelon’i Jehovah Nandritra ny Fitondrana Telo Tany Alemaina.”) Nanomboka tamin’ny alahady 22 Aprily 2018 ilay fampirantiana, tao amin’ny Toerana Fahatsiarovana ny Toby Fitanan’i Ravensbrück, any Fürstenberg, any Alemaina. Hatao any Erfurt sy Rostock ary Potsdam, any Alemaina, koa ilay fampirantiana mandritra ny taona 2019. Hatao ao amin’ny lapam-panjakana any Brandebourg ilay any Potsdam.
Aseho ao amin’ilay fampirantiana ny tantaram-piainan’i Adolf Graf, anisan’ireo olona nomelohin’ny Nazia sy ny kominista.
Aseho ao ny tantaram-piainan’ny rahalahy sy anabavy 12, izay nenjehin’ny Nazia nefa mbola nenjehina koa tamin’ny fitondrana kominista tamin’ny RDA. Nalaina feo ny famakiana ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah nomelohina ho faty sy ny taratasy fanaovam-beloman’izy ireo ary ny lahatsoratra tany anaty gazety sy ny antontan-taratasy sasany tamin’ny andron’ny Nazia. Azo henoina ao amin’ilay fampirantiana koa ireo. An’aliny no nogadraina noho ny fiaviany, na ny heviny ara-politika, na noheverina ho mpanao heloka bevava. Hita amin’ilay fampirantiana kosa hoe tena nino an’i Jehovah ny rahalahy sy anabavintsika ka izany no antony nanagadrana azy ireo.
Hoy ilay mpahay tantara atao hoe Detlef Garbe, tamin’ny kabary nataony nandritra ny fanokafana an’ilay fampirantiana: “Tsy tian’ny mpiambina nazia mihitsy ny Vavolombelon’i Jehovah satria nanana finoana matanjaka, niray saina, ary tsy nety niova hevitra mihitsy. ... Nahavita tsy nivadika ny Vavolombelon’i Jehovah na dia tany amin’ny toby fitanana aza, satria tena tia nifanampy sady natoky tanteraka hoe hamonjy azy ireo Andriamanitra araka ny fanantenany.”
Mbola matoky foana ny Vavolombelon’i Jehovah hoe hanampy azy ireo i Jehovah na dia enjehina sy raran’ny fanjakana aza ny asany, hoatran’ny ataon’i Rosia amin’izao.—Isaia 54:17.
Fanenjehana ny Vavolombelon’i Jehovah Nandritra ny Fitondrana Telo Tany Alemaina
Repoblikan’i Weimar (1918-1933)
Tian’ny mpitondra fivavahana nanerana an’i Alemaina hotorina eny amin’ny fitsarana ny Vavolombelon’i Jehovah (nantsoina hoe Mpianatra ny Baiboly tamin’izany). Nampangaina hoe mivarotra boky tsy ara-dalàna sy tsy mandoa hetra ireo rahalahy, nanomboka tamin’ny 1922, ary henjana ny sazy nomena an’izay meloka. Efa ho 5 000 ny raharaha ara-pitsarana nahatafiditra ny Mpianatra ny Baiboly tamin’ny 1927 ka hatramin’ny 1930.
Nampirisihin’ny mpitondra fivavahana ny Sampan-draharahan’ny Fanangonan-ketra, tamin’ny 1928, ka nanapa-kevitra hoe mandoa hetra amin’izay ny Watch Tower Bible and Tract Society. Niaiky teo anatrehan’ny besinimaro ireny fivavahana ireny tatỳ aoriana hoe ny hanakana ny fitorian’ny Mpianatra ny Baiboly no tanjony. Nampakarin’ireo rahalahy teny amin’ny fitsarana ilay raharaha ary nandresy izy ireo.
Nandrara ny bokin’ny Mpianatra ny Baiboly ny polisy tany Munich, any amin’ny faritr’i Bavière, tamin’ny Novambra 1931. Nanohana an’ilay fandrarana ny fanjakan’i Haute-Bavière, tamin’ny Febroary 1932. Nolavin’ny Minisiteran’ny Atitany any Bavière avy eo, ny Martsa 1932, ny fampakarana fitsarana ambony nangatahin’ny Mpianatra ny Baiboly satria hoe “tsy marim-pototra.”
Fitondrana Nazia (1933-1945)
Lasa mpitondra an’i Alemaina i Adolf Hitler, tamin’ny 30 Janoary 1933. Tonga dia noferany ny fahalalahana haneho hevitra sy hanao fivoriana. Nandritra an’ilay ezaka manokana nizarana an’ilay bokikely hoe Ilay Fotoan-tsarotra, ny 8-16 Aprily, no norarana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah tao Bavière. Norarana koa taorian’izay ny tany amin’ny faritra hafa.
Betsaka ny mpitondra fivavahana nanohana an’i Hitler sy ny fanenjehany ny Vavolombelon’i Jehovah. Nisy fandaharana natao, ohatra, tao amin’ny radio, ny 20 Aprily 1933, mba hankalazana ny aniverseran’i Hitler. Izao no nolazain’i Otto, mpitondra fivavahana loteranina, tamin’izay:
“Rehefa nandinika tsara momba ny fitondrana nazia ny Fiangonana Loteranina Alemà eto Saxe, dia nanapa-kevitra hoe hanohana azy io. Hiara-hiasa akaiky amin’io fitondrana vaovao io ny fiangonana mba hahatonga ny fanjakana hatanjaka indray sy ho mpivavaka. Azo resahina sahady ny vokatra voalohan’izany fiaraha-miasa izany: Voarara androany ny Fikambanana Iraisam-pirenen’ny Mpianatra ny Baiboly Tso-po sy ireo sampany eto Saxe.”
Efa voarara tany amin’ny ankamaroan’ny faritr’i Alemaina ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny tapatapaky ny taona 1933 (nisy lalàna nolanina nandrara ny asan’izy ireo tamin’ny 1 Aprily 1935). Lasan’ny miaramilan’i Hitler ny tranobe natao biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’izany. Natao savahao matetika ny tranon’ireo rahalahy sy anabavy ary be dia be no voasambotra.
Nisy 25 000 teo ho eo ny Vavolombelon’i Jehovah tany Alemaina tamin’ny faran’ny Ady Lehibe II. Nampijalin’ny Nazia ny 10 700 teo ho eo tamin’izy ireo, nalefa tany amin’ny toby fitanana ny 2 800, ary 1 000 teo ho eo no namoy ny ainy.
Repoblika Demokratikan’i Alemaina (1949-1990)
Nilaza ho tsy mampijaly olona io fitondrana io, izay antsoina koa hoe Alemaina Atsinanana, nefa mbola nampijaly Vavolombelon’i Jehovah hoatran’ny fitondrana nazia ihany.
Vavolombelon’i Jehovah 5 000 mahery no nomelohin’ny fitsarana, tamin’ny 1950 ka hatramin’ny 1985, satria hoe manao asa anoherana ny fanjakana, milaza zavatra manohintohina ny fiandrianam-pirenena, ary mampirisika ny olona hiady. Manefa sazy dimy taona sy tapany eo ho eo izy ireo.
Nisy 62 ny fitambaran’ny Vavolombelon’i Jehovah maty tany am-pigadrana, nandritra ny fitondran’ny RDA.
Fahatsiarovana An’ireo Gadra Nafahana Tany Brandebourg: Ny Vavolombelon’i Jehovah no Tena Voaresaka